Uvavanyo lokuqala lwamehlo ebantwaneni: uyenza nini | Oomama Namhlanje
Uvavanyo lokuqala lwamehlo ebantwaneni: uyenza nini
UToñy Torres | | Iingcebiso, ZeMpilo
Ngexesha leenyanga zokuqala zobomi bosana lwakho, yenza uhlolo rhoqo kubandakanya ukuva okanye umbono. Nangona kunjalo, kubalulekile ukwenza uvavanyo lwamehlo oluthe ngqo, kunye nengcali, ukuze iingxaki ezinokubonakala zisencinci. Uphengululo oluhlala lungahoywa okanye lusemva kwexesha, njengoko kunjalo utyelelo lokuqala kugqirha wamazinyo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ujonge inkqubela phambili yabantwana ngandlela zonke. Ngale ndlela, banako ukubona utshintsho olwenziwe kwangoko, Baya kuba nakho ukuphucula ngokuphawulekayo kwaye baphephe imiphumo emibi. Nangona kungekho budala buchanekileyo bokwenza uvavanyo lwamehlo lokuqala ebantwaneni, kuyacetyiswa ukuba kungabi ngaphezulu kweminyaka emi-3 ubudala.
Ukujonga kuqala kwamehlo
Nokuba awuqapheli nayiphi na ingxaki yamehlo okanye awukrokreli ukuba kungayimfuneko, kubaluleke kakhulu ukuba yingcali ejonga ukukhula kwamehlo abantwana. Uninzi lweengxaki zombono zikhula ngaphandle kweempawu kwaye kubantu abangengabo abecandelo, kunzima kakhulu ukuba babone. Ngesi sizathu, kucetyiswa ukuba uvavanyo lwamehlo lokuqala lwenziwe ngaphambi kweminyaka emi-3.
Nangona kunjalo, akukho mfuneko yokuba ulinde de kuphononongwe iminyaka emi-3 ukuya kugqirha wamehlo, ngakumbi ukuba ufumanisa naziphi na kwezi mpawu zilandelayo.
Ukuba ubona ukuphambuka kancinci kulo naliphi na iliso. Inokuba kukuphambuka kancinci xa ujonge phambili okanye xa ujika ujonge ecaleni. Ubunzima obunokunyuka ngokuhamba kwexesha ukuba abunyangwa ngokukhawuleza.
Uyaqonda ukuba umntwana unengxaki yokubona. Nokuba usondela kufutshane okanye ukude, ukuba umntwana akaboni kakuhle, uya kuba nakho ukubona ukuba uwavale njani amehlo kancinci ukuze ajonge ngcono.
Uyaqaphela ukuba bomvu okanye ukukrazula rhoqo.
Utshintsho kwiinkophe: Ezinye iingxaki zamehlo zibangela ukungaqheleki kwamehlo. Ukuba uqaphela ukuba enye yeenkophe ivaliwe ngakumbi kunenye, ngaphandle kwesizathu esibonakalayo, kuya kufuneka uye kwi-ofisi kagqirha wamehlo.
Ukongeza kwezi mpawu ziqhelekileyo kunye neempawu zeengxaki zombono, kuya kufuneka ulumkele naluphi na utshintsho emehlweni abantwana bakho. Ukuba ufumanisa into engaqhelekanga, nayiphi na inkcukacha ngaphandle kwesiqhelo, kuya kufuneka ukhawuleze uye kugqirha wabantwana okanye kwiofisi yamehlo, nantoni na onokuyenza ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » ZeMpilo » Uvavanyo lokuqala lwamehlo ebantwaneni: uyenza nini
Umfundisa njani umntwana wam ukuzikhusela
Unyana wam uchitha imali eninzi